၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ 5nm Chip တွေထုတ်လုပ်ဖို့ သေချာသွားတဲ့ Samsung
10 Jul 2019 . 12:04 PM
Samsung ကနေ အခုအချိန်မှာ Mobile Processor တွေကို ဆက်တိုက်ထုတ်လုပ်နေတာ အခုဆိုရင်လည်း နောက်လာမယ့်အနာဂတ်အတွက် Mobile Processor နည်းပညာတစ်ခုကို ထုတ်လုပ်ဖို့ အတည်ပြုပေးလိုက်ပါပြီ။ ဒါကတော့ 5nm Architecture Chip တွေကို ထုတ်လုပ်ဖို့ပါ။
Samsung က အခု 5nm Architecture နည်းပညာကို 5LPE (5nm Low-Power Early) Manufacturing Process လို့ နာမည်ပေးထားပြီးတော့ လက်ရှိ ကုမ္ပဏီရဲ့ EUV Lithography ကို အခြေခံပြီး ထုတ်လုပ်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး အခြေခံထားတဲ့အတွက် ဒီ 5nm Chip က Reliable ဖြစ်ပြီး Power Efficient လည်းဖြစ်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီ 5nm Architecture က ARM ရဲ့ Cortex-A53 နဲ့ Cortex-A57 Cores တွေပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ လက်ရှိ Processor တွေထက် 25% ပိုကောင်းတဲ့ Logic Efficiency နဲ့ ပါဝါစားက 20% ဝန်းကျင် ပိုသက်သာသွားမှာပါ။ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းအနေနဲ့တော့ 10% လောက်ပိုကောင်းလာမယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
အခု Chip Production အတွက် ကုန်ကျစရိတ်က ဒေါ်လာ ၄.၆၁၅ ဘီလီယံလောက်အထိ ကုန်ကျနိုင်ပြီးတော့ ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှ ပြီးစီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီ 5nm Processor တွေက လာမယ့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာတော့ အသုံးပြုလာနိုင်တော့မှာပါ။
by Zawyè . 17 mins ago